मिति, bronchus क्यान्सर (अक्सर रूपमा उल्लेख फोक्सो क्यान्सर) सबै ज्ञात ट्यूमर रोगहरु को 95% छ श्वसन प्रणाली को। यो भन्दा सामान्यतः मान्छे पाइन्छ आफ्नो यौन विशेषताहरु बिना पुग्यो उमेर चालीस पाँच वर्ष। त्यसपछि, कुनै पनि अंग मा विकास भएको लुमेन बन्द गर्ने bronchi कक्षहरूको संरचना को एक उल्लङ्घन एक क्यान्सर रोग सुरु, वा यसको पर्खाल मा बढ्छ, वा bronchi र वरपरको ऊतक मा बढ्छ।
जिगर, र 20% - - मस्तिष्क र हड्डी मा bronchi को क्यान्सर संग मान्छे को आधा, त्यहाँ लसीका नोड्स र adrenal ग्रन्थीहरूको, 40% मा metastases छन्। अक्सर, रोग सही फोक्सो, यसको शेयर को शीर्ष असर गर्छ।
त्यहाँ ठूलो bronchi (मुख्य, segmental र इक्विटी) स्ट्राइकिङ् एक परिधीय bronchus क्यान्सर कि ब्रोन्कियल ट्यूब मा विकास र केन्द्रीय छ। अवस्थामा को 60% मा अन्तिम देखेको।
एक क्यान्सर रोग को विकास को चरण विचार गर्नुहोस्।
1 ट्यूमर को सानो आकार metastases को विकास बिना ठूलो bronchi वा ब्रोन्कियल ट्यूब छ।
विकास को पहिलो चरणको को कि जस्तै आकार को2सुनिंनु, तर त्यहाँ नजिकैको limfauzlah मा एकान्त metastases छन्।
3. बाहिर ट्यूमर छ प्रकाश को सीमाहरु र यसको छिमेकी अंग मेटास्टेसिस गुणन बढ्छ र लसीका नोड्स असर गर्छ।
4 ट्यूमर गर्न को विस्तार छाती, pleura, डायफ्राम metastases मानव शरीर भर फैलाउन सुरु।
रोग को धेरै चित्र प्रभावित क्षेत्र, रोग को चरण, ट्यूमर संरचना को आकार मा निर्भर गर्दछ। Bronchus क्यान्सर लक्षण अन्ततः गंभीर हुन्छ जो र सास को shortness सँगसँगै छ आफ्नो खोकी देखाउन सुरु। समय खोकी छैन कम छ, तर केवल बढ्छ। यो भन्दा वृद्धि समयमा उच्चारण छ , क्यान्सर ट्यूमर को यो एक विदेशी शरीर रूपमा श्लेम लाग्एको निकाय परेशान हुँदा जसबाट bronchospasm कारण।
ट्यूमर बिखर गर्न सुरु गर्दा, त्यहाँ hemoptysis छ। यो लक्षण विरामीहरु को 40% मा निहित छ। तेस्रो लक्षण कारण pleura को हार गर्न छाती मा दुखाइ छ। यसलाई निहित 70% bolnymh छ। अर्को लक्षण पनि फोक्सो भाग (pneumonitis विकास मा) को सुनिंनु समयमा निरन्तर तापमान मा वृद्धि मानिन्छ।
कमजोरी सामान्य लक्षण, वजन, डराएको, थकान बीचमा भेद गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रोन्कियल क्यान्सर जस्ता रोगहरु को विकास, श्वसन पर्चा मा निरन्तर पुरानो भडकाऊ प्रक्रिया असर गर्छ। यी क्षयरोगका पीडित एक परिणाम रूपमा फोक्सो मा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस र निमोनिया, साथै scars समावेश गर्नुहोस्। आफ्नो धूम्रपान, विकास गर्न पनि योगदान वायु प्रदूषण, साथै बंशाणु।
यो आधुनिक उपचार केही प्रभाव दिन सक्छ भने गर्नुपर्छ। त्यसैले, यस्तो रोग संग अक्सर सर्जरी र विकिरण र केमोथेरापी प्रयोग गर्नुहोस्। निमोनिया को मामला मा एन्टिबायोटिक को एक पाठ्यक्रम तोकिएको छ। यी उपाय रोगी गरेको अवस्थामा अस्थायी सुधार प्रदान गर्न र आफ्नो जीवन लम्ब्याउनु। चिकित्सकीय उपायहरूको विकल्प क्यान्सर रोग, यसको कठोरता को डिग्री को आकार, साथै metastases को उपस्थिति मा निर्भर।
लागि रोकथाम उपाय श्वसन पर्चा मा सुनिंनु को उपचार समावेश, पुरानो प्रकारका विकास रोक्न। तिनीहरूले भने उपचार प्रतिक्रिया छैन, तिनीहरूले छ, फोक्सो को प्रभावित क्षेत्र हटाउन, surgically हटाउन।
यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण धूम्रपान, कार्यस्थल मा हानिकारक पदार्थ विरुद्ध सुरक्षा गर्न उपकरणहरू प्रयोग रोक्न छ।
यसरी, bronchus क्यान्सर श्वसन प्रणाली सबै ट्यूमर रोगहरु बीच अग्रणी स्थान छ। बंशाणु, वातावरण को नकारात्मक प्रभाव र धूम्रपान एक क्यान्सर रोग को अग्रणी instigators छन्।
मृगौला क्यान्सर: metastases को लक्षण
डिम्बाशय क्यान्सर: पहिलो संकेत र लक्षण र उपचार को विशेष चरण
ओन्कोलजी संस्थान। Petrova एन (रूस, सेन्ट पीटर्सबर्ग)
बुल टेरियर: वर्ण, वर्णन, हेरचाह र प्रशिक्षणको तरिका
एक दुइ बयलर मा Cutlets - सुझाव र रहस्य।
विन्डोज प्रशासन7उपकरण
शिकारको लागि चिकनी बाकसहरू: समीक्षा, विवरण र समीक्षा
जो शहर आवास संग Cadet Boys 'विद्यालय छ? मास्को मा केटीहरु Cadet विद्यालय